Semalt: WordPress Child Theme - Nahoana?
Amin'ny tena fiainana dia ny zanaka no ray aman-dreny, ary afaka mampifanaraka ny fahazarana tsara sy ratsy ary ny toetran'ny olon-dehibe. Mandritra izany fotoana izany, manana toetra tsy manam-paharoa izy ireo izay tsy nomen'ny reniny na ny dadany azy ireo. Azonao atao ny milaza izany amin'ny WordPress themes. Ho an'ny loha-hevitra WordPress rehetra nakarinao, nividy na nametrahana, misy lohahevitra iray momba ny lova sy lovan-tsofina mahaliana izay mifanaraka amin'ny tanjonao samihafa.
Ity misy fanadihadiana avy amin'i Alexander Peresunko, manam-pahaizana manokana momba ny Semalt , momba ny fomba sy ny antony hamoronana lohahevitra an-tsoratra ao amin'ny WordPress.
Nahoana no mamorona ny lohahevitra momba ny zaza:
Ny lohaheverin'ny ankizy dia afaka mandresy sy mandova ny template, ny sary, ary ny lohahevitry ny lohahevitry ny ray aman-dreniny. Ao amin'ny WordPress, misy ny Tontolo Fitaizana zaza tsy miankina saingy miara-miasa amin'ny lohahevi-dehibe ho an'ny ray aman-dreny mba hanatontosa asa be dia be. Miankina amin'ny ray aman-dreny izany ary tsy azo atao raha tsy mipetraka sy mavitrika ao amin'ny tranokala WordPress ny lohahevi-dehibe. Raha mamorona lohahevitra momba ny ankizy ianao dia tokony hitadidy ireo zava-dehibe anankiroa:
Tokony hampiditra lahatahiry vaovao ao amin'ny lahatahiry miaraka amin'ny anaran'ny foto-kevitry ny zanakao ianao.
Ny tranokala styles.css ao amin'ny lahatahiry vaovao dia tokony hampidirina miaraka amin'ny fampahalalana an-tsoratra manokana
Rehefa avy namorona ny lohahevitra momba ny ankizy ianao, dia ho hitanao fa manana fampahalalana mitovy amin'ny an'ny ray aman-dreny. Ny antony iray ilainao hamoronana lohahevitra an-tsoratra dia ny tenenin'izy ireo amin'ny WordPress izay lohahevitry ny ray aman-dreny ho an'ny tranonkala manokana.
Ahoana ny famoronana lohahevitra an-jaza:
Azonao atao ny mamorona mora foana ny foto-kevitry ny zaza amin'ny alalan'ny fitadidiana ireto hevitra manaraka ireto.
1. Ampio ny lahatahiry vaovao ary esory ny tahiry styles.css
Ny dingana voalohany dia ny manampy ampidiram-pejy vaovao amin'ny loha-hevitra misy anao amin'ny anaran'ny loha-hevitrao ary hanitsy ny sehatra misy azy. Dingana iray manan-danja, ary tsy tokony manao na inona na inona ianao .css ny rakitra raha tsy fantatrao ny fomba hanovana azy ity ity rakitra ity dia hita ao amin'ny fizarana Header amin'ny WordPress anao ary manana fampahafantarana manokana momba ny site, ny toerana misy azy, ary ny votoatiny. Raha fantatrao ny etimôlôjian 'ity teny ity mba ampio ilay izy azafady araka ny toromarika misy eto.
2. Fanitsiana ny tontolon'ny ray aman-dreny
Tokony hohavaozina tsara ny foto-kevitra momba ny ray aman-dreny ary hahafantatra ny zavatra rehetra momba ny fomba amam-piainany rehefa mamorona lohahevitra iray ao amin'ny WordPress. Amin'ny teny marina, dia tsy misy endri-tsoratra voafaritra tsara, ary izany dia satria ny endrika amam-panahin'ny ray aman-dreny dia manana fomba amam-panao. Na izany aza, afaka manitsy azy ireo ianao ary manadihady ny tranonkala ho valiny tsaratsara kokoa amin'ny loha-hevitrao .
3. Fanampiana ny rakitra functions.php
Raha toa ianao ka maniry hampiditra rakitra fonctions.php ho an'ny loha-hevitrao momba ny zanaka mba hahatonga azy ho tsara kokoa noho ny teo aloha, dia mila mampiditra fehezan-dalàna manokana ianao ary manitsy ny fanovana ny loha-hevitrao. Ankehitriny dia fantatsika ny zavatra tokony hataontsika amin'ny lohahevitry ny ankizy ary mamorona azy ireny. Ny ampahany tsara indrindra dia ireo lohahevitra ireo dia mora ny mamorona ary afaka manamboatra, manamboatra ary manamboatra azy amin'ny fotoana rehetra. Ankoatr'izay dia afaka manampy safidy vaovao amin'ny lohahevitry ny ankizy arakaraka ny fepetra takiana aminao ianao, fa mampirisika anao tsy hanitsy fehezan-dalàna na manova ny fanalahidin'ny foto-kevitry ny ankizy noho ny fampiasany voafetra sy safidy voafaritra.
Ny zavatra mahafinaritra amin'ny ankizy
Ankehitriny dia fantatrao ny fototry ny foto-kevitry ny zanakao ary azonao atao ireto zavatra mahafinaritra manaraka ireto
1. Manampia New Options ho an'ny Customizer - Azonao atao mora foana ny manolotra safidy vaovao ho an'ny mpanamboatra azy ary hahita fa mahazo ny singa rehetra avy amin'ny lohahevitry ny reny
2. Ampio Templates vaovao momba ny Post - Raha mampiasa WooCommerce ianao, dia azonao atao ny manampy ny modely momba ny vokatra ho an'ny zanakao mba hanomezana azy endrika fijery. Ampio amin'ny ankizy ilay lohahevitra dia miantoka fa tsy ho very ny fehezan-teny rehefa manomboka ny lohahevitry ny ray aman-dreny.
3. Atsaharo ny drafitra misy ny lohahevitra momba ny ray aman-dreny - Tokony asongadinao ireo sary ireo ny template amin'ny lohahevi-dehibe. Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra sy mahazatra indrindra hanaovana izany dia mamaky ny môdelin'ny ray aman-dreny azy ireo amin'ny loha-hevitra ankizy ary manomboka manamboatra izany avy eo Source .